Dowlada Falastiin oo codsatay iney kamid noqoto xubin katirtsan Qaramada Midoobe - iftineducation.com
Dowlada Falastiin oo codsatay iney kamid noqoto xubin katirtsan Qaramada Midoobe
aadan21 / September 20, 2011
Hadii dalabka dowlada Falastiinyinta la’aqbalo iney kamid noqoto xubinkatirsan Qaramada Midoobe, waxey kahelaayaan faa’ido badan dowlada Falastiin, waxaa kamid ah faa’idooyinka ugu weyn booska Falastiinyiintu lamid noqonmaayo midka Kasmir, Filipinta koonfureed iyo Thailanta koonfureed.
Intaan ka aheyn jiritaanka dowlada falastiinyiinta, faa’idada kale ee uleedahay inay kamid noqdaan xubin qaramada midoobay waxa weeye nasiib iney uyeelankarto iney kamid noqdaan falastiinyiinta xubnaha aan joogtada aheyn ee qaramada midoobay taas macnaheedu yahay iney falastiiniyiintu ay yeeshaan awood ay iskaga caabiyaan culeyska dowlada yahuuda israel kuheyso.
Falastiniyiintu xitaa waxey u istaagi karaan ineey ilaaliyaan amaanka iyo nabad kusoo dabaalida bariga dhexe.
Kuma siijirto xitaa faa’idooyinka bulshada, dhaqanka, dhaqaalaha iyo waliba waxbarashada.
Xubin kanoqoshada falastiin waxey usahleysaa ineey aktif kanoqdaan hayado badan oo hoostaga qaramada midoobay dabcaan taasna waxey usoo sahleysaa faa’ido badan dowlada falastiin si’ay ugu soo kabsato katagitaanka aduunka kale.
Isticmaalka internetka ee komputerka (PC) oo qadka kasii baxaayo.
Madaxweyne Mahmud Abbas oo qaatay go’aan taariikhiya ee raadinta xornimada Falastiin